$ 90 miliara dolara ambany kokoa: maneso ny fitsapana ny sambo mpisitrika ambanin'ny tany i Subway
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » $ 90 miliara dolara ambany kokoa: maneso ny fitsapana ny sambo mpisitrika ambanin'ny tany i Subway
Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Etazonia Vaovao Vaovao
Ao amin'ny sanganasa trolling, Subway dia nandavaka ny vidin'ny fifampiraharahana ambanin'ny sambo Australia niaraka tamin'i France, talohan'ny niorenan'ny Canberra mba hahazoana sambo mpisitrika nokleary avy any Etazonia.
Nofoanan'i Aostralia ny fifanarahana amina sambo 90 miliara dolara amerikana miaraka amin'i Frantsa ho amin'ny fifanarahana iray hafa amin'i Etazonia.
Notsiahivin'i Frantsa ireo masoivohon'izy ireo avy any Aostralia sy Etazonia tamin'ny zoma ho valin'ilay voalaza fa “fihetsika tsy eken'ny mpiray dina sy ny mpiara-miombon'antoka”.
Nirehareha tao ambanin'ny tany i Subway fa manana subs "tsy misy nokleary" izay "$ 90 miliara $" kokoa.
Nanesoeso ny fivarotana sambon-tany frantsay-aostralianina tamin'ity herinandro ity, namoaka dokambarotra maneso ny sandwiches-ny, ny US fast food chain Subway, ary nilaza fa manana “subs tsy misy nokleary” izay “90 miliara dolara”.
Ny fanapaha-kevitr'i Aostralia hanafoana ny baiko marobe mitentina 90 tapitrisa dolara AUS miaraka amin'i Frantsa dia nahatonga ny pejy iray manontolo Metro dokam-barotra navoaka tao amin'ny gazety The Age androany, nandinika ny vidin'ny fivarotana sambo mpisitrika Australie niaraka tamin'i France, talohan'ny nialan'i Canberra mba hahazoana submarines misy herinaratra avy any Etazonia.
Na dia maro aza ireo mpampiasa haino aman-jery sosialy no nahita fa mailaka sy mahatsikaiky ilay dokambarotra, ny hafa kosa nahita azy io ho “maharikoriko” sy tsy fanajana.
Mpampiasa iray aza no voampanga Metrodokambarotra “fikomiana” momba ny “fampiasana [ny] hevitra momba ny fahafatesan'olona be dia be hivarotra sakafo maivana,” raha jerena ny akaiky indrindra ny ady tany Chine, Aostralia ary Etazonia.
Notsiahivin'i Frantsa ny masoivohon'izy ireoavy any Aostralia sy Etazonia ny zoma ho valin'ilay nilazalazaina ho “fihetsika tsy eken'ny mpiray dina sy ny mpiara-miasa” vokatry ny fifanarahana AUKUS (Aostralia, United Kingdom, Etazonia).
Ny filoha frantsay Emmanuel Macron dia voalaza fa nampandrenesina fotsiny ny fanapahan-kevitr'i Aostralia hiala amin'ny fifanarahana submarine roa firenena 2016 alohan'ny nanambarana ny vaovao.
Jean-Yves Le Drian, ny minisitry ny raharaham-bahiny frantsay, dia nilaza fa “nanindrona an-damosina", Izay nampitandrina fa" ny vokatr'izany dia misy fiatraikany amin'ny fiheverana antsika rehetra momba ny fiaraha-miasa, ny fiaraha-miasa ary ny maha-zava-dehibe ny Indo-Pacific ho an'i Eropa. "
Nanamarina ny fisintomany ny fifanarahana tamin'i Frantsa i Aostralia tamin'ny filazany fa nisondrotra ny vidiny noho ny nandrasana voalohany.